China HP 120 Modely mpamokatra menaka mangatsiaka mpanamboatra sy mpamatsy | Huipin
Fahaiza-mamokatra: 4-5 Ton isaky ny 24 ora
Hery: 15 KW
Refy: 2100 * 610 * 785 mm
Helix savaivony (mm)
Miaraka amin'ny fahefan'ny mpampiantrano (kw)
Fahaiza-manao (kg / h)
Ny menaka madinidinika dia ny fanaovan-tsolika solika mandeha ho azy voalohany indrindra, fanamafisana ny milina, fitrandrahana solika, iray, fandidiana mandeha ho azy tanteraka, ny akora ao anaty masinina dia afaka manery menaka, tsotra sy mety, manatsara ny fahombiazan'ny asa. Mofomamy menaka, fitrandrahana solika, fanasiana solika, sns. Dia manana fepetra takiana amin'ny hafanana, milina fanodinam-bokotra kely miaraka amina rafitra fanaraha-maso hafanana tsy manam-paharoa hahamora kokoa ny fampandehanana azy, diplaomatika avo lenta. Masinina Dingzhou Yongsheng manokana amin'ny famokarana gazety an-trano kely (fanontana solika herinaratra tokana) mpanamboatra matihanina, hery ara-teknika matanjaka, manara-penitra tanteraka amin'ny fitoviana sy ny tombotsoan'ny tsirairay, ny mpanjifa aloha, ny fahatokisan'ny fitsipika voalohany, ny kalitao ary ny fampandrosoana, fanavaozana pragmatika , tongasoa tsara. Ary ny namana rehetra mba hametraka fifandraisana tsara amin'ny fiaraha-miasa sy hikatsaka fampandrosoana iraisana, mba hahafahan'ny ankohonana an'aliny misakafo amin'ny ambiny fa ny menaka fandrahoan-tsakafo madio dia mifanaraka amin'ny filan'ny tsena, ny fampidirana dingana 60 dingana fanaraha-maso hafanana kely fanaraha-maso mandeha ho azy, haavon'ny tsindry, ny tahan'ny solika, loko madio, azo tsindriana: voanjo, voan-kesika, voasarimakirana, rongony, voan-tanamasoandro solika ary paompy menaka kely miasa maro hafa.
1.Fijerena ny asa: afaka mamonjy asa 60% ho an'ny vokatra mitovy ary 40% ny vidin'ny asa isan'andro ho an'ny olona iray na roa afaka manao famokarana.
2. Ampiasaina be dia be: azo ampiasaina hanerena tanteraka ny karazan-java-boahary 20 mahery, toy ny voanjo, sesame, masomboly legioma, soja, tanamasoandro ary flax amin'ny ambaratonga fahatelo indray mandeha.
3. Kalitaon'ny solika madio: ny sivana solika banga dia ampiasaina hanala ny sisa tavela mba hiantohana ny kalitaon'ny solika madio ary hahatratra ny fenon'ny quarantine fahasalamana.
4. dian-tongotra kely: faritra iray amin'ny atrikasa 10-20 m2 afaka mamaly ny filan'ny famokarana.
Alefaso etsy ambany ny antsipirian'ny fanontanianao, kitiho ny "Alefaso" izao!
Manaraka: Fitaovana fanosorana menaka mangatsiaka HP120
Sehatra fanadiovan-tsolika masaka mahandro
Tsipika fanodinana menaka legioma
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Gazety Oliva Oliva, Mpanondraka solika voa, Masinina fanaovan-gazety solika, Mpanondraka solika,